News | पैसा
27 Nov 2020 | शुक्रबार, १२ मंसिर, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
News | Tag: पैसा
विश्व बैंकबाट रु ४२ अर्ब सहयोग
काठमाडौँ । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड– १९ पछिको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पु¥याउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
कर्मचारीले दिए आविष्कार केन्द्रलाई एक लाख २७ हजार
काठमाडौँ । दुर्गम गाउँमा काम गर्दाका समस्या आ–आफ्नै छन् । स्रोत साधन हुने हो भने दुर्गमका बस्तीको विकासमा पनि परिवर्तनको आभाष गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका छन् जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु ।
बुर्किना फासो, माली र नाइजरलाई एक अर्ब ७० करोड डलर मानवीय सहयोग
एजेन्सी । चरम मानवीय संकट व्यहोरिरहेका अफ्रिकाका साहेल क्षेत्रका तीन राष्ट्रका लागि २० भन्दा बढी दातृ निकायहरुले यस वर्ष झण्डै एक अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
चीनका अधिक धनाढ्यले सन् २०२० मा १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थप रकम कमाए
एजेन्सी । चीनका अधिक धनाढ्यले सन् २०२० मा १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थप रकम कमाएको हुरुन नामक चिनियाँ वार्षिक समृद्ध सूचीमा मङ्गलबार उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम उनीहरूले बितेका पाँच बर्षमा गरेको मुनाफाभन्दा बढी हो ।
तपाईंको हातमा पैसा टिकाउने अचुक उपाय यस्ता छन्
एजेन्सी । धन कमाउनु भन्दापनि हातमा नटिकेर कति मानिसहरु दिक्क हुने गरेको पाइन्छ । धन कमाउनु अनि आवश्यकताभन्दा बढि खर्च भएर हातमा नरहनु मान्छेको आफ्नै बानी र व्यवहार मुख्य कारक भएको हुनसक्छ ।
यो देशले ल्याउँदैछ एक लाखको नोट, तर यसबाट जम्मा दुई किलो आलुमात्र आउनेछ !
एजेन्सी । कुनै समय भेनेजुएला धनी देशका रुपमा परिचीत थियो । तर आज यस देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएर गएको छ । मुद्रास्फीति को दर यति उच्च छ कि मानिसहरूले एक कप चिया वा कफीको लागि झोला भरी नोट लिएर जाने गरेका छन् ।
बाबुले जोडेको अर्बौँ सम्पत्ति १२ वर्षमा तहसनहस पारे अनिल अम्बानीले !
एजेन्सी । भारतमा मात्र नभई पुरै विश्वमा चर्चित छन् दुई धनी दाजुभाई मुकेश धिरुभाइ अम्बानी र अनिल धिरुभाइ अम्बानी । यी दुई ठुला व्यापारीका पिता हुन् उद्योगपछि धिरुभाई अम्बानी । मुकेश अम्बानीको जन्म सन् १९५७ मा भएको थियो भने अनिल अम्बानीको सन् १९५९ मा भएको थियो ।
पैसाका लागि विवाह गरेका बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जसले पैसा लागि विवाह गरेका छन् । बलिउडबाट बिस्तारै करिअर ओझेलमा परेपछि उनीहरुले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।
तपाईले जति पैसा कमाएपनि तपाईका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैनः समुन्द्र शास्त्र
एजेन्सी । शास्त्रका अनुसार शरीरमा कोठीको निकै महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । तपाइँले जति पैसा कमाएपनि तपाइँका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैन ।
मृतकका परिवारलाई दुई लाख सहयोग
लमजुङ । लमजुङमा चट्याङबाट मृत्यु भएका बेँसीशहर नगरपालिका–६ पुमागाउँका ४२ वर्षीय सन्त विकको परिवारलाई राहतस्वरुप रु दुई लाख प्रदान गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लमजुङले राहतस्वरुप रु दुई लाख मृतकका परिवारलाई आज सहयोग उपलब्ध गराएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले मृतक विकको आमा जुठी विकलाई रु दुई लाख हस्तान्तरण गरे ।
मानुङकोटमा प्रहरीचौकी राखिने, शौचालय र खानेपानीको लागि पनि बजेट विनियोजन
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित पर्यटकियस्थल मानुङकोटमा प्रहरीचौकी राख्ने तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो समय पर्यटकको चहलपहल बढ्दै जान थालेपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अस्थायी प्रहरीचौकी राख्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमिस्थित राम लक्ष्मण ताल
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाः पाइलटको मृत्यु
शरिरलाई फिट राख्न कस्ता खानेकुराहरु खाने ?
काठमाडाैँ । बिहान खाली पेटमा मनतातो पानीमा कागतीको रस हालेर त्यसमा मह मिसाई खाने गर्नुपर्छ ।
चिसो मौसममा भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता कामहरु
मोटोपन कसरी घटाउने, यी अभिनेत्रीबाट लिनुहोस् टिप्पसहरु
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकी एक नर्सको पिडाः कस्ती थिए, कस्ती भए
एजेन्सी । अमेरिकाको टेनेसीकी एउटी नर्स आठ महिनादेखि कोरोना भाइरस पीडितको सेवा गर्दै आइरहेकीछन्, तर यस समयमा उनी यस घातक महामारीको प्रभावबाट बच्न भने सकिनन् ।
अस्ट्राजेनिका/अक्सफोर्डको कोभिड–१९ खोप कति प्रतिशत प्रभावकारी ?
कहिलेसम्म आइपुग्ला मोर्डनाको कोरोना भ्याक्सिन, कति पर्नेछ मुल्य ?
दुबईका शासक शेख मोहम्मदकी राजकुमारी पत्नीको बडीगार्डसँग थियो सम्बन्ध !